Ngabe ividiyo kaDrake 'Degrassi' Reunion Ingasho Ukuqalisa Kabusha? - Izindaba
Ividiyo kaDrake ‘Degrassi’ Reunion Ingase Ivele Iholele Ekuqaliseni kabusha
Drakes Degrassi Reunion Video Might Just Lead Reboot
Noma ngabe uyi-Gen X-er, Millennial noma I-Xennial , kungenzeka ukuthi ubhekiwe I-Degrassi: Isizukulwane Esilandelayo futhi bazi ngokungaqondakali ukuthi uDrake wadlala uJimmy Brooks kwinsipho yentsha yaseCanada emuva ngenkathi esahamba ngu-Aubrey Graham.
Kwividiyo entsha ethi I'm Upset yomnqobi weGrammy, uqoqe abalingani bakhe baseDegrassi High, futhi manje asikwazi ukuzibuza: Ingabe lokhu kungaholela I-Degrassi uqalise kabusha? * Iwela iminwe *
Ungalokothi uthi ungalokothi, uMiriam McDonald, owayedlala indawo ka-Emma ku-hit show, utshele E! Izindaba . Asikwazanga ukubikezela ukuthi le vidiyo izofika. Kwazi bani ukuthi isitobhi esilandelayo kulesi sitimela esihlanyayo esizobe sikuso sizoba yini.
UShane Kipple, owayedlala iSpinner, unanela umdlandla kaMcDonald, wathi, angicabangi ukuthi kuzoba khona omunye umuntu lapho uma kungaba nethuba lokwenza uhlobo oluthile lokuqalisa kabusha ngohlobo oluthile, noma ngabe yiluphi uhlobo, anginikeli Angicabangi ukuthi noma ngubani uzoshesha ukwenqaba lokho!
Ngakho-ke yisikhathi sokuthi I-Degrassi: Isizukulwane Esilandelayo ?
Ibhola lisenkantolo yakho, uDrake.
amabhayisikobho amahle kakhulu wezindaba zesiNgisi
ungasusa kanjani izinwele ezingadingeki ebusweni
imfashini yabesifazane abafushane
indlela yokuphila impilo elula
amakhambi asekhaya okwelapha inkwethu